Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka JWXO oo Weerar Kuqaaday Fadhiisin Ay Wayaanuhu Leeyihiin.
Ciidanka JWXO oo Weerar Kuqaaday Fadhiisin Ay Wayaanuhu Leeyihiin.
Posted by Dulmane	/ December 7, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ee gacanta gumaysiga madow kujira ayaa sheegaya weerar culus oo ay ciidanka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia CJWXO kuqaadeen fadhiisin ay ciidanka wayaanuhu lahaayeen.
Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO, ayaa sheegaya weerar qorshaysan oo ay naftood hurayaasha utaagan xoraynta ciida Ogadenia kuqaadeen fadhiisin ay ciidanka wayaanuhu kulahaayeen duleedka Dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob.
Sida xogta aan kuhelay ciidanka wayaanaha ayaa goobta uu weerarku kadhacay kuwaayay askar iyo saraakiil badan, sidoo kale waxaa lagu gaadhsiiyay khasaare hantiyeed oo aad ubadan, khasaaraha dhabta ah ee weerarkan kadhashay ayaan wali lasoo faahfaahinin.
Dhinaca kale ciidamada nacabka ah ee wayaanaha ayaa gudaha Dagmada Xamaro kudilay nin shacab ah oo lagu magacaabi jiray Allaha unaxariistee Carab Mursal, marxuumka ayaa sida lasheegay ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada ee Dagmada Xamaro.
Ciidanka wayaanaha ayaa caadaystay xasuuqa shacabka dulman ee ree Ogadenia, iyagoo dadka laaya kadib markii goobaha dagaalka lagaga itaal roonaado.